Fikarohana momba ny firaisana Ny lanitra dia natao ho an'ny sary hosodoko sy ny Reincarnation tena nataon'i Jesosy Akiane Kramarik - Fikarohana Reincarnation
Notohanana tamin'ny: Ny Fanahy na ny Torolalana ho an'ny Fanahy Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw
From: Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana, nataon'i Walter Semkiw, MD
Reincarnation & Famokarana Ankizy
Akiane Kramarik dia nanamboatra ny fahafahana nanoratra tamin'ny faha-efatra taonany taorian'ny fananana traikefa izay nolazainy fa nentina tany an-danitra. Ny famaritan'izy ireo ny traikefa dia mitovy amin'ny azy Echo Bodine, izay tafiditra ao amin'ny bokiko, Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana. I Echo koa dia nanome alalana anay handefa ny sarin'ny vatan'ny zazalahy maty iray nipoitra avy tamin'ny vatany, izay nankinin'ny Trooper State Minnesota taminy. Raha hijery ireto sary ireto dia mandehana any: Fanahy Masina
Teraka tamin'ny fianakaviana tsy mino an'Andriamanitra i Akiane tamin'ny 1994. Izy dia mampianatra ny tenany amin'ny zavakanto ary nilaza fa "Andriamanitra no mpampianatra ahy." Ny fahitana azy dia nitarika ara-panahy ny fianakaviany ary ny sary hosodoko dia mivarotra $ 50,000 amin'ny $ 1,000,000. Manoratra poetry ihany koa i Akiane. Araka ny voatanisa eo amin'ny tranonkalany, rehefa nanontany ny toerana nianarany nanoratra izy, dia namaly i Akiane fa ny hevitra "novolena ahy" dia nanoratra koa hoe: "Amin'ny alalan'ny Fanahy dia miaina fiainana hafa aho."
Araka ny fijeriko, ny fahaiza-manaon'i Akiane dia vokatry ny fanahiny izay mamolavola hologram-tenany ao Akaine ary maka ny vaovao ao an-tsainy. Ny zaza miteraka amin'ny fomba toy izany dia mametraka talenta sy fahaiza-manao avy amin'ny fiainana taloha. Ity tranga ity dia voafaritra ao amin'ny fizarana: Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano
Peter Paul Rubens amin'ny fiainana taloha nataon'i Akiane Kramarik
Na dia tsy manaitra aza aho, dia indraindray aho dia mahazo fampahalalana marina momba ny fiainana teo aloha tamin'ny alalan'ny hevitra. Manara-maso mandrakariva ny fampahalalana tahaka izao aho amin'ny Ahtun Re, mpitari-dalana amin'ny fanahy izay nampitain'i Kevin Ryerson, izay nampiseho ny fahaiza-manaon'ny lalao taloha. Raha vao nahita ny loko tao amin'ny zavakanto Akaine aho, izay matetika no fivavahana ara-boajanahary dia nahatsikaritra avy hatrany aho fa izy no fampodiana indray vao niorina an'i Peter Paul Rubens, mpahay sary Barikan'i Flama izay teraka tao 1577.
Nandritra ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson tao amin'ny 2008, nanaiky i Ahtun Re fa Akiane no vovoka indray ny taonan'i Rubens. Raha mbola kely i Akiane tamin'izany fotoana izany dia nikatsaka ny fahazoan-dàlana avy amin'ny fianakaviany aho mba hahatonga ity olom-boafidy miresaka momba ny fiainana ity. Feno fankasitrahana ny renin'i Akiane, Forelli Kramarik aho, noho ny nanomezany alalana, izay nolazainy fa tokony hanana fahalalahana haneho ny hevitro. Tsara homarihina anefa fa ny filazana fa i Akiane no santionan'ny vovoka ho an'i Rubens, fa tsy i Akiane na ny fianakaviany. Raha te hianatra bebe kokoa momba an'i Akiane, mankanesa any: www.artakiane.com
Ao amin'ny sarimihetsika 2014, Ny lanitra dia tena izy, sarin'i Portrait ny sary nosoratan'i Akiane tamin'ny faran'ny sarimihetsika. Ny lanitra dia ho an'ny Real dia momba ny zazalahy iray efa-taona, Colton Burpo, izay milaza fa nitsidika ny Lanitra izy ary nihaona tamin'i Jesosy. Tamin'ny fiafaràn'ny sarimihetsika dia nijery ny sarin'i Jesoa an'i Akiane i Colton ary nitatitra fa ny endrik'i Jesosy, fony izy nihaona tamin'i Jesosy tany an-danitra.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Mitovy amin'ny endriky ny endrika i Peter Paul Rubens sy Akiane Kramarik. Apetraho eo amin'ny sary ny sarinao.
Ny fiainana taloha talenta: Ny talenta ara-javakanto nataon'i Peter Paul Rubens dia na dia Akiane aza. Samy fantatra amin'ny kanto ara-pivavahana na ara-panahy.
Fiovana eo amin'ny lahy sy vavy: Rubens lahy, raha vehivavy Akiane.